Home » သတင်း » အနီရောင်ဧရာ 24 နာရီ Flash ကိုရောင်းရန် - သေနတ်သမား Suite 25 နှင့် PluralEyes 13 ဟာ Off 4.1%
လက်ပံ, OR - ဇွန်လ 29, 2017 -ယနေ့သာ 24 နာရီအဘို့,အနီရောင်ဧရာအနီရောင်ဧရာ PluralEyes, စက္ကန့်အတွင်း Audio / Video ထပ်တူပြုခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ် tool ကို၏ငါးနှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဆင်နွှဲရန် Flash ကိုရောင်းရန်အပြေးလိမ့်မည်။ အနီရောင်ဧရာ PluralEyes 25 နှင့်ထဲမှာသေနတ်သမား Suite 4.1 နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ကိုချွတ် * 13% ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်redgiant.comသောကြာနေ့, ဇွန်လ 24th အပေါ်ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 10th အပေါ် 1am PDT ရန်ကုန် (29pm EDT) မှ 10am PDT ရန်ကုန် (1pm EDT) ကိုလာမယ့် 30 နာရီ, များအတွက်စတိုးဆိုင်။
Flash ကိုရောင်းရန်ပိတ် PluralEyes နှင့်သေနတ်သမား Suite 25% ပါဝင်သည်:
ပညာရေးဆိုင်ရာ Store ကို (ပြီးသား 50% ချွတ်)
အဆိုပါ 25% -off လျှော့စျေးကိုသက်ဝင်စေရန်, ကုဒ် FIVEYEARS ကိုအသုံးပြုပါ။ ရောင်းရန် 30am PDT ရန်ကုန်မှာဇွန်လ 2017, 10 အဆုံးသတ်ထားသည်။
အနီရောင်ဧရာ PluralEyes ငါးနှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော
အနီရောင်ဧရာ PluralEyes စျေးကွက်အပေါ်အမြန်ဆုံးအများစုတိကျမှန်ကန် Audio / Video ထပ်တူပြုခြင်း tool ကိုဧဒုံဧရာသေနတ်သမား Suite ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ PluralEyes 4.1 အတွက်နယူးအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အရောင်နိုင်တဲ့ coding အပါအဝင်လက်ငင်းတုံ့ပြန်ချက်,
Adobe Premiere Pro ကိုတိုက်ရိုက် PluralEyes နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်
အလိုအလျောက်စက်ကိုထောက်လှမ်းနှင့်အတူ Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီး
ရှည်လျားသောကလစ်များအတွက်တစ်ဦးက / V ကို၏မတိုက်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပေးသောအော်တိုနစ်ပြင်ဆင်ခြင်း,
PluralEyes 4.1 ၏တစ်ဦးကအပြည့်အဝလိုင်စင်ရုံ $ 225 (များသောအားဖြင့် $ 299) အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်တစ်ဦးအဆင့်မြှင့်ရုံ $ 75 (များသောအားဖြင့် $ 99) ဖြစ်ပါသည်။
သေနတ်သမား Suite 13.0: ယနေ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများအဘို့မရှိမဖြစ် Tools များ
အနီရောင်ဧရာသေနတ်သမား Suite ရိုက်ကူး, ဘေးကင်းလုံခြုံသောအသံနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်တည်းဖြတ်ရေးအချိန်ဇယားမှကင်မရာကိုကနေစေမည်သောယုံကြည်မှုနှင့်အတူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူတို့၏လမ်းရိုက်ကူးဖို့လွတ်လပ်မှုကိုပေး tools တွေကိုအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်အလိုအလျောက်များနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ဖန်တီးမှုများ, ဖြုတ်ပစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထမထိနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ post ကိုအဘို့အလတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဧဒုံဧရာသေနတ်သမား Suite အတွက် Tools များပါဝင်သည်:
PluralEyes 4.1:အလျင်မြန်ဆုံး, အကောင်းဆုံးနှင့်အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန် Audio / Video ထပ်တူပြုခြင်း tool ကို
1.0 များကိုဖြုတ်ပစ်:လယ်ပြင်၌သင်တို့၏ရိုက်ကူး၏ရိုးရှင်းသော & ယုံကြည်စိတ်ချရသော backup လုပ်ထား
လက်ငင်း 4K:4K resolution ကိုများနှင့်အခြား high-resolution ကို formats ဗီဒီယို Upconvert
frames 1.1:သင့်ရဲ့အဟောင်းများကိုရိုက်ကူး Deinterlace နှင့် 24P က convert
သေနတ်သမား Suite 13 ၏တစ်ဦးကအပြည့်အဝလိုင်စင်ရုံ $ 300 (များသောအားဖြင့် $ 399) အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်တစ်ဦးအဆင့်မြှင့်ရုံ $ 75 (များသောအားဖြင့် $ 99) ဖြစ်ပါသည်။
အနီရောင်ဧရာ PluralEyes 4.1 သို့မဟုတ်သေနတ်သမား Suite 13 ဝယ်ယူရန်
အနီရောင်ဧရာ PluralEyes 4.1:www.redgiant.com/products/pluraleyes/downloads/
အနီရောင်ဧရာသေနတ်သမား Suite 13:www.redgiant.com/products/shooter-suite/downloads/
အပိုဆောင်းအကူအညီအဘို့, ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါအနီရောင်ဧရာထောက်ခံမှုအသင်းမည်သည့်မေးခွန်းများကိုအတူ။ အနီရောင်ဧရာထုတ်ကုန်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီးwww.redgiant.com/products/.
* အဆိုပါရောင်းချမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့အနီဧရာ Volume ကိုအစီအစဉ်မပါဝင်ပါ။ အနီရောင်ဧရာထုတ်ကုန်များ၏ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလိုင်စင်အပေါ်အများကြီးရတဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, အနီရောင်ဧရာ Volume ကိုအစီအစဉ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှု:redgiant.com/volume။
အနီရောင် Pledge မျှဝယ်ယူမှုကူညီပြီးအတူဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှအနီရောင်ဧရာရဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာအနီရောင် Pledge အာမခံချက်အကြောင်းကိုလေ့လာပါwww.redgiant.com/redpledge/.
မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များနီဧရာထံမှမည်သည့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အစုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကိရိယာအစုံတောင်းဆိုရန်မှာ Anya နယ်လ်ဆင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်anya@zazilmediagroup.com.
အနီရောင်ဧရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, အယ်ဒီတာများ, VFX အနုပညာရှင်နှင့်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်နာများများအတွက်ထူးခြားသော tools တွေကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းသူကိုပါရမီအနုပညာရှင်နှင့်နည်းပညာသမား၏ဖွင့်လုပ်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုအလုပ်နှင့်ဘဝအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ် - ကြှနျုပျတို့သညျ "နှစ်ဆအောက်ဆုံးလိုင်းက" မခေါ် - ဤအတွေးအခေါ်ကုမ္ပဏီကြီးရလဒ်များကိုသီးကိုသီးသောရိုးရှင်းသော tools များတည်ဆောက်ခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက်ရှုပ်ထွေးလျစ်လျူရှုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, (ကို Magic Bullet, Trapcode, ဠာနှင့် PluralEyes လိုမျိုး) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်စံဖြစ်လာနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လွှင့်ကြသည်။ 200,000 အသုံးပြုသူများကိုကျော်နှင့်အတူပြုလုပ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုမြင်နေခြင်းမရှိဘဲတီဗီ၏ 20 မိနစ်စောင့်ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ပါပဲ။ အနုပညာရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သောကြောင့်အတွေ့အကြုံများကနေကျနော်တို့အနုပညာရှင်တွေများအတွက် tools များရှိသောလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာဖို့မသာပုံစံမျိုးရယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင် Watch 200 အခမဲ့လဲ tutorial ကျော်ထံမှလေ့လာသင်ယူ, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုကြိုးစားပြီးwww.redgiant.com.
အသံထပ်တူပြုခြင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး plugins ကို post ကိုထုတ်လုပ်မှု အနီရောင်ဧရာ SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုကိုထပ်တူပြုခြင်း	2017-06-29
ယခင်: VTC ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်
နောက်တစ်ခု: ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စေ, La La မြေတွင်အနုပညာတစ်ဦးလုပ်ငန်းခွင်ရိုက်ကူး
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "အနီရောင်ဧရာ 24 နာရီ Flash ကိုရောင်းရန် - သေနတ်သမား Suite 25 နှင့် PluralEyes 13 ဟာ Off 4.1%" ။ http://www.broadcastbeat.com/red-giant-24-hour-flash-sale-25-off-shooter-suite-13-and-pluraleyes-4-1/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။